Jariirada Marca Oo Soo Bandhigtay Hadal Lagu Yiri Zlatan Ibrahimovic Oo Sii Kiciyay Dagaalkii Dhexmaray Kooxaha Manchester Ka Dib Kulankii Old Trafford - Laacib.net
Jariirada Marca Oo Soo Bandhigtay Hadal Lagu Yiri Zlatan Ibrahimovic Oo Sii Kiciyay Dagaalkii Dhexmaray Kooxaha Manchester Ka Dib Kulankii Old Trafford
Kulankii Manchester Derby waxa uu ku dhamaatay si aan wanaagsaneyn ka dib markii ay isku dhaceen ciyaartoyda iyo shaqaalaha labada kooxood, waxaana jariirada Marca ay sheegeyaa in dagaalka uu sii huray markii ciyaartoya City ay ku maadeysteen weeraryahanka United Zlatan Ibrahimovic.
Qaar ka mid ah ciyaartoyda City ayaa ahaa kuwa dhakhso ku galo qolkooda labiska markii ay ciyaarta soo dhamaatay halka ciyaartoyda kale ay qolka labiska galeen iyagoo heesaya islamarkaana qoob ciyaaraya.
Qaar ka mid ah shaqaalaha iyo ciyaartoyda City ayaana ku maadeystay weeraryahanka reer Sweden: “Ibra, waad hadal badan tahay laakiin dhaqdhaqaaqa waa yar yahay.” ayaa la maqlay iyagoo ku dhahaya Ibrahimovic.
United ayaana arinkaas ka carootya iyadoo isqabqabsiga uu halkiisa ka sii socday ugu yaraan 2o ruux ayaana ka qeyb qaadatay. Dhalooyinka biyaha ayaa la isku tuuray.
Kooxda Pep Guardiola ayaa aheyd kuwa si qeylo ah u dabaaldegayay ka dib guushooda oo keentay inay 11 dhibcood oo nadiif ah ay ku qabtaan hogaanka horyaalka, Jose Mourinho ayaana ugu galay qolka labiska isagoo ka dalbaday inay hoos u dhigaan dabaaldegooda islamarkaana ay ixtiraam muujiyaan.
Si kastaba, waxaa hadalkiisa ka xanaaqay goolhayaha City Ederson kaasoo fahmay luqadiisa Portuguese-ka, waxaana meeshaa ka dhashay isku qeylin iyo isqabqabsi xoogan.
Aflagaadooyin ayaana la isweydaarsaday iyadoo caag biyo ah uu tuuray Romelu Lukaku ay ku dhacday caawiyaha tababaraha Manchester City Mikel Arteta kaasoo daqar uu ka soo gaaray isha korkeeda.
Xiriirka kubada cagta Ingariiska ayaa weydiistay inay labada kooxood ka soo warbixiyaan wixii dhacay, waxaana laga yaabaa inay ciqaab ku muteystaan.